Qaybta 1. Nadiifinta Mobile Touch Screen
Qaybta 2. Nadiifinta Mobile Phone gargaaraha
Qaybta 3. Xagashada Screen Nadiifinta Mobile
Qaybta 4. Nadiifinta Mobile Phone Case
Qaybta 5. Nadiifinta Mobile Phone Xagashada Screen ka Inside
Si aad u nadiifiso screen xiriiri aad mobile ee aad u baahan doontaa:
Maro A micro-fiber.
Qaar ka mid ah biyaha.
Nooc ka mid ah nadiifiye screen fudud haddii biyo uma shaqeeyo.
Si aad u bilaabaan, raac tallaabooyinkan:
1. Raadi maro micro-fiber ah. Haddii aanad garanayn waxa ay tahay, waa nooca maro aad ka heli leh muraayadaha si ay u sii nadiif ah. Sidaas, haddii aadan lahayn mid, aad u ogaato meesha aad ka heli mid ka mid haatan.
2. Falanqeeyaan nooca smudges ama calaamadaha screen xiriiri aad mobile ee uu leeyahay. Haddii ay u muuqdaan khafiif ah oo si fudud loo saari karo isku dayi iyagu marka hore lagu nadiifiyo maro micro-fiber qalalan.
3. Haddii smudges ma soo maro engegan, isku day inaad u Esplanaden biyo qaar ka mid ah oo weliba derejo yar salaax shaashadda maro micro-fiber ah.
4. Haddii biyo ma uusan qaban shaqo iyo sidoo, waxa la joogaa wakhtigii si ay ugu guuraan si ay u nadiifsan shaashad. Sida kor ku xusan, nadiifiye waa in khafiif ah ee dabiiciga ah. Deeqa qadar yar oo ku saabsan in la maro micro-fiber iyo xoqin khafiif ah shaashadda ilaa marks smudge ka soo off. Ha engegan hawada ka nadaafad iyo cadaydo maro khafiif ah in ka badan screen taabashada si meesha looga saaro marka wasakh kasta oo weli.
Dos iyo Xayeesiinta:
• Marwalba isticmaal maro micro-fiber nadiif ah. Haddii aad ogaato in mid ka mid ah oo ku saabsan in la isticmaalo aad tahay waa wasakh ah, waxaa isla markiiba ku dhaq hor inta aadan isticmaalin.
• Ha cadaadis badan ku screen xiriiri mobile iyadoo ku xoqeen ayay maro micro-fiber ah.
• Ha isticmaalin khamriga lagu nadiifiyo ama lagu nadiifiyo ku salaysan in ay leeyihiin ammonia ku screen xiriiri mobile.
Si aad u nadiifiso gargaaraha telefoonka gacanta, waxaad u baahan doontaa:
Saabuun lagu dhaqo 1.Hand
Sahayda biyaha 2.Abundant
Si aad u bilaabaan nadiifinta gargaaraha telefoonka gacanta, qaabkan soo socda:
• dejinaaya gacmahaaga saabuun iyo salaax ku gacmahaaga si ay u sameeyaan daaha.
• Peel off gargaaraha screen mobile ka telefoonka aan ka maydhin lakabka saabuun ah.
• Ku qoo gargaare shaashadda biyo iyo saabuun u salaax labada dhinac ay si tartiib ah, ka dibna waxa ay biyo ugu maydhaa. Continue habka ilaa labada dhinac waa wada nadiifsan yahay.
• Ku rid gargaaraha telefoonka gacanta hore ee taageere hayo xiriir yar u dhexeysa farahaaga iyo gargaaraha.
• ha u wali si buuxda u qallajin labada dhinac. Markaasaa waxaa u dunk ee khamriga iyo gilgil dhawr jeer in laga takhaluso wax yar oo khamriga lagu dhibciyo si looga fogaado faddarada.
• si taxadar leh Saar gargaaraha aad shaashadda oo aad ku fiican tahay inuu tago.
• Marwalba isticmaal saabuun dhaqashada caadiga ah.
• Ha meel u gargaaraha dib u isticmaalaya sharooto iskooj sida ay keeni kartaa calaamadaha xun ee shaashadda oo jirka ka mid ah taleefanka.
Si aad u nadiifiso wax xagashada ka screen ee telefoonka gacanta, waxaad u baahan doontaa:
1. Micro-fiber maro ama dhar kasta oo jilicsan
Kareem la xoqo 2. Car
Si aad u bilaabaan, sii wado sida lagu faray hoos ku qoran:
• Codso tiro yar oo ah labeen xoq gaari ka kaxayntu ay si maro jilicsan doorbidayo maro micro-fiber ah.
• Ku bilow ku xoqeen ayay si tartiib ah maro this on meesha uu xagashada ku qoran shaashada.
• Ka dhig ku xoqeen ayay si tartiib ah ilaa xagashada iska tagaan ama mar dambe la arki karo.
• Marwalba isticmaal maro nadiif ah. Haddii aad ogaato in mid ka mid ah oo ku saabsan in la isticmaalo aad tahay waa wasakh ah, waxaa isla markiiba ku dhaq hor inta aadan isticmaalin.
• Ha cadaadis badan ku screen xiriiri mobile iyadoo ku xoqeen ayay la maro.
Xaaladaha Mobile yihiin kuwo tayo kala duwan oo ka samaysan yihiin qalab kala duwan oo ku xiran hababka nadiifinta dul taas oo ka duwan mid kale.
Nadiifinta kiis caaga
Si aad u nadiifiso caag ah kiiska mobile aad u baahan doontaa:
1.Soap ama gacan gel
3.A ilkaha buraashka
• dejinaaya maro iyo qaar ka mid ah ku shub (akhri dhibic ama labo) gel-dhaqashada waxaa ku. Haddii aad adigoo isticmaalaya saabbuun ah, noqonto wax yar oo ku saabsan mid ka mid ah geeska maro qoyan.
• Qaado kiiska telefoonka gacanta, waxa dunk biyo qaar ka mid ah iyo bilaabi ku xoqeen ayay maro saabuun ku yaal gal ay dusha sare ee kiiska labada gudaha iyo dibaddaba.
• Si aad u qaadato wasakh iyo intii ka hadhay off cidhifyada iyo labada geesood, la isticmaalo buraash iliga. Si fudud u qoyso burush ilkaha iyo xoqin saabuun qaar ka mid ah waxaa saaran yahay ka dibna bilaabi ku xoqeen ayay • Caday on geesood iyo geesaha kiiska.
• celi tallaabooyinka 2 iyo 3 kiiska ilaa si buuxda waa wasakh oo lacag la'aan ah. Ka saar wax kasta oo saabuun haraaga ah la isticmaalayo, maro nadiif ah oo qoyan oo ha qalalan kiiska.
• Ha cadaadis badan ku screen xiriiri mobile iyadoo ku xoqeen ayay la maro ama buraashka ilkaha sida laga yaabaa in ay qaadato renjiga ama ku keento xagashada jidhka kiiska.
Si aad u nadiifiso shaashad mobile phone gudaha waxaad u baahan doontaa:
Xirmada kaashawiito A
Madaxda fur Takhasuska
Qalabka pry Screen
Maro Micro-fiber ama maro wax jilicsan
Kareem la xoqo Car
• Iyada oo ku xidhan nooca telefoonka gacanta in aad leedahay iyo nooca screen waxaa qoreysa laga yaabaa in aad ama ma awoodi doono inaan dhammeeyo hawsha aad iskaa. Sidaa darteed, ka hor inta uusan si dhab ah uu bilaabay in uu qaado telefoonka marka laga reebo, sameeyaan qaar ka mid ah cilmi baaris ku shaashadda telefoonka aad.
• Tallaabada xigta waa in uu qof ku siin tutorial ah jidka aad doonaysid in aad uga jari aad shaashadda ka telefoonka. Waxaad u jiheysan karo si youtube ujeedadaas. Macno ahaan waxaa jira boqolaal Casharrada ku saabsan mowduuca.
• Marka shaashadda ayaa ka go'ay raac tilmaamaha ku xusan hoos "nadiifinta xagashada screen mobile".
• Hubi in shaashada mobile gebi ahaanba qalalan oo ay suntu lacag la'aan ah ka hor inta aanan maroojin dib meel.
> Resource > masixi > Sidee loo nadiifiyaa Mobile Phone